WARBIXIN: Kheyre & Fahad Yaasiin Malaga Yaabaa in Madaxda cusub ee Itoobiya ay ku Qanciyaan Qorshahooda M/Gobaledyada? – XAMAR POST
Todobaad gudihiis waxaa Itoobiya isaga daba maray laba wafdi oo midna uu hoggaaminayay agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xiriir dhow la leh Itoobiya iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, si ay madaxda cusub ee Itoobiya ugu qanciyaan in ay taageeradeeda u weeciso dhanka dowladda Federaalka, taa bedelkeedana loo fuliyo danaha Soomaaliya kaga xiran.
Warbaahinta ayaa fahansan khatarta ay dowladda Federaalka dareentay markii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo in ka badan %80 dhulka Soomaaliya gacanta ku haya ay shaaciyeen taageerada ay u hayaan isbaheysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo ee go’doomiyay Qatar.
Heshiiska Berbera iyo saamiga Itoobiya
Ilo wareedyo ku dhow ayaa inoo xaqiijiyay in Madaxweynaha Soomaaliya uusan wali saxiixin xeerkii ay ansixiyeen labada aqal ee Baarlamaanka horaantii bishii March ee dalka looga mamnuucayay shirkadda imaaraadka ee dekadaha ee DP World oo dhowr dekadood oo Soomaaliya ku yaalla kula jira qandaraas muddo dheer ah loo saxiixay. Taas oo dowladda Federaalka ah u suurtagelineysa in ay waxba kama jiraan ka soo qaaddo xeerkaas islamarkaana saamiga Itoobiya ee dekedda Berbera uu shaqeeyo.
Muhiimmadda ay dekedaha waddamada deriska ah u leeyihiin Itoobiya cidna kama qarsoona. Ra’iisulwasaaraha cusub Abiy Axmed waxa uu shaqdiisa ugu horreysa ka billaabay inuu heshiisyo la saxiixdo dalalka Djibouti, Sudan iyo Kenya maadaama xaqiijinta nolosha dadkiisa ay ku xiran tahay, waxaanan meesha ka marneyn dhameystirka hesiiskii DP World ee Berbera.
Falanqeeyayaasha arrimaha gobolka ayaa aaminsan in ogolaanshaha dowladda Federaalka uusan muhiim u ahayn dhaqan galka heshiiska Berbera, maadaama uusan siyaasad la xiriirin oo uu ku kooban yahay horumarin, ka mid ahaanshaha Itoobiya ee hishiiskan uu siinayo damaanad qaad dhanka urur goboleedyada ah iyo ammaankaba, sidaas darteed Itoobiya muhiim uma aragto ogolaanshaha ama diidmada dowladda Federaalka ah.
Ammaanka Itoobiya iyo xiriirka Federaalka
Ciidamo ka socda Itoobiya qeybna ay AMISOM ka tirsan yihiin iyo qeyb aan tiradooda la xaqiijin karin kana mid ahayn howlgalka AMISOM ayaa ku sugan dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Jubbaland , ka sokoow taageerada ay maamulladaas siiyaan waxa ay gobolladaas oo dhammaantood xad la leh Itoobiya ka sugaan ammaanka qaranka Itoobiya, iyaga oo hubiya in aysan khatarta argagaxisadu u gudbin gudaha Itoobiya.
Siyaasadda soo jireenka ah ee madaxda Itoobiya kala dhaxleen ma ahayn inay la xaalaan Soomaaliya oo mid ah, taas oo iminkana ah mid xaqiiqda ka fog, balse Villa Soomaaliya ayaa ku taameyso si ay u wiiqdo awoodda dowlad goboleedyada qaar oo aan siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba ku xirneyn Muqdisho.
Xiriirka Itoobiya iyo Sucuudiga
Booqashadii ugu dambeysay ee Ra’iisul Wasaaraha Abiy Axmed uu ku tagay boqortooyada Sucuudiga ayaa muujisay sida ay Itoobiya muhiim uga tahay isbaheysiga uu Sucuudigu hoggaaminayo ee go’doomiyay Qatar, iyadoo mashaariic ku kacaya malaayiin dollar loo ballan qaaday horumarinta Itoobiya, xabsiyadana laga sii daayay kumannaan maxaabiis Itoobiyaan ah markii ugu horreeysay taariikhda xiriirka labada dal.
Imaaraadka ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh Itoobiya, waana arrinka keenay in saami weyn laga siiyo dekedda Berbera, lana filayo in ay saamiyo kale ka siiyaan dekedaha kale sida Kismaayo iyo Boosaaso.
Marka la isugu geeyo arrimahan oo idil weli ma muuqato in Itoobiya ay dowladda Soomaaliya ku gacan siineyso cadaadinta dowlad goboleedyada.